किसानको उजुरी परे धानको नक्कली बीउ बेच्नेलाई ठगी मुद्दा « Bikas Times
११ फागुन, काठमाडौं । किसानलाई नक्कली विउ बिक्री गर्ने आयतकर्ता तथा बिक्रेतालाई ठगी मुद्दा चलाईने भएको छ ।
बीउमा गरेको ठगीको कसुरअनुसार दण्ड गर्न अन्य कानून पर्याप्त नभए पछि प्रहरीसँग समन्वय गरेको कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मुद्दा चलाउन मिल्ने वा नमिल्ने भन्नेबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोसँग मन्त्रालयले गरेको छलफलमा किसानको उजुरी परे ठगी मुद्धामा कारवाही गर्न राय प्राप्त भएको कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालका सचिवालय प्रमुख उपसचिव डा.गंगा आचार्यले बताए ।
‘किसान ठगिएको विषयमा मन्त्रालय गम्भीर छ, उपलब्ध कानूनमा टेकेर तत्कालका लागि जरिवाना भएको छ, तर यो पर्यप्त देखिएको छैन,’ डा. आचार्यले भने ।
‘कसुर धेरै तर जरिवाना कम भन्ने गुनासा आएका छन्, मन्त्रीज्यू जसरी पनि यसलाई सम्बोधन गर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ, अब किसानले आ-आाफ्नो जिल्लामा ठगी उजुरी दिन सक्छन्,’ आचार्यले भने ।
कृषकले उजुरी दिए नक्कली विउ आयतकर्ता तथा बिक्रेतालाई प्रहरील पक्राउ गर्ने बाटो खुल्नेछ । किसान ठग्ने आयातकर्ता तथा बिक्रेताको अनुमतिपत्र खारेज प्रक्रियाअनुसार हाललाई निलम्बन गरिएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
२३ करोड हानी, ३० हजार जरिवाना !
प्रतिवेदनअनुसार १७ करोड रुपैयाँ त कृषकलाई क्षतिपूर्ति नै दिलाउनु पर्ने उल्लेख थियो । यति ठूलो मात्रामा क्षति गर्ने पिडकलाई कारबाही गर्न कानुन हेर्दा कृषि मन्त्रालयको कानुनी हैसियत फितलो पाइएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
बीउ आयतकर्ता सनराइज एगि्रकल्चर रिसर्च प्रालि दाङलाई ३ लाख, १४ जना बिक्रेतालाई जनही दुई लाख र दुई वटा विक्रेतालाई २० हजारका दरले जरिवाना गराइएको छ ।